तातो फलामले पोलेका विकको उपचारमा आर्थिक अभाव::Online News Portal from State No. 4
तातो फलामले पोलेका विकको उपचारमा आर्थिक अभाव
बागलुङ, १६ जेठ– ढोरपाटन नगरपालिका–२ खल्बाङ स्थायी घर भई लामो समयदेखि निसीखोला गाउँपालिका–१ हुल्दीमा आरने काम गर्दै आएका विशाल परियार तातो फलाममा परेर गम्भीर घाइते भएपछि आर्थिक अभावका कारण उपचार नपाउँदा एक हप्तादेखि अलपत्र परेका छन् । उनी गत जेठ ९ गते आफ्नै आरनमा तताएको तातो फलाममा बायाँ हात जल्दा गम्भीर घाइते भएका हुन् । आरनमा फलाम तताएर बाहिर राखेको र आफूलाई छारेरोग भएकाले सोही समयमा बेहोस भई पल्टदा उक्त तातो फलाममा परेको परियारले बताए । आफूसंग उपचारको लागि एक रुपैयाँसम्म नभएकाले तत्काल उपचारको लागि कतै जान नसकेको उनले बताए ।
जलेको घाउ झन्–झन् गम्भीर बन्दै गएपछि उनी सोमबार मात्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बुर्तिबाङमा उपचारको लागि आएका थिए । अहिले उनी ईमरजेन्सी कक्षको २ नं. बेडमा अलपत्र परेका छन् । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बुर्तिबाङमा उपचार हुन नसक्ने भएपछि उनलाई रिफर गर्नुपर्ने भएको अस्पताल स्रोतले बताएको छ । घाउ इन्फेक्सन भएर गम्भीर बनिसकेकाले र अप्रेसन गर्नुपर्ने भएकाले यहाँ उपचार हुन नसकेकाले रिफर गर्नु परेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बुर्तिबाङका प्रमुख डा. विजय श्रेष्ठले बताए । रिफर भइसकेपछि कहाँ गएर कसरी उपचार गर्ने भन्ने कुराले घाइते परियारलाई निकै चिन्तित बनाएको छ ।
उनको परिवारमा बिहान बेलुकी हातमुख जोर्न समेत मुस्किल छ । उनकी श्रीमतीले दिनभर अरुको काम गरेर परिवार धानेकी छन् । आफूलाई बाँच्ने रहर भएकाले उपचारको लागि आर्थिक सहयोग गरिदिन परियारले सबैलाई अपिल गरेका छन् । उनलाई आर्थिक सहायता र उपचारको लागि विभिन्न व्यक्ति र निकायमा पहल भइरहेको र उपचारका लागि तत्काल पोखरा पुराउन लागिएको निसीखोला–२ का अध्यक्ष कुबीर विकले बताए । उता केही आर्थिक सहयोगका लागि नगरपालिकामा समेत पहल गर्ने ढोरपाटन नगरपालिका–१ का अध्यक्ष चित्रबहादुर भण्डारीले बताए ।